काठमाडौ : शरीरको विभिन्न भागमा जस्तै घाँटी, गर्दन, हात, पाखुरा वा अन्य भागमा आउने दाद एक जटिल समस्या हो।दाद जुनसुकै उमेर समूहका मानिसमा पनि देखिने समस्या हो।
दादबाट छुटकारा पाउनको लागि जत्ति औषधी उपचार गरे पनि यो बारम्बार बल्झिरहने हुन्छ। दादको औषधी उपचार गर्न धेरै पैसाका साथ समय पनि खर्च हुन्छ तर यो पूर्ण रुपमा भने निको नहुने र बारबार बल्झिने समस्याले सताईरहेको हुन्छ ।
१. यसका लागि चाहिने सामग्री: तिते करेला, नरिवलको तेल र कपुर।२. बनाउने विधि: सुरुमा एउटा वा आधा तीते करेलालाई सानो सानो टुक्रामा काटी यसलाई पिसेर पेस्ट बनाउने।अब एउटा सफा कचौरामा एक चम्चा नरिवलको तेल र एक दाना कपुरलाई पाउडर बनाएर मिसाउने।
कपुर (पूजा गर्न प्रयोग गरिने) नरम हुने भएकोले हातले नै पाउडर बनाउन सकिन्छ । यी दुई सामग्रीलाई राम्ररी मिसाईसकेपछी यसमा एक चम्चा तीतेकरेलाको पेस्ट राखेर मज्जाले मिसाउने।
यो मिक्स्चर पेस्ट तयार भए पछी ।३. लगाउने विधि: शरीरको जुन भागमा दाद छ, त्यो भागमा यो पेस्ट लगाएर रातभर यत्तिकै रहन दिनुहोस र बिहान उठेपछी यसलाई राम्ररी धुनुहोस् ।
यो उपचार विधि प्रयोग गरेको केहि दिनमै जस्तोसुकै पुरानो र जिद्धी दाद पनि हटेर जानेछ । यो १०० प्रतिशत प्राकृतिक र लाभदायी विधि हो। -ब्राइट नेपाल
२०७७ चैत्र २०, शुक्रबार ०६:५१ गते 1 Minute 1407 Views